Fisaorana avy amin'ny Te.Fi
Misaotra anareo tapaka sy namana havana mahatratra sy mahavonjy e!Niaraka nanafana sy nitotorebika tamin ny fety teo Eny tsy hadino koa ireo olona tsy no tonga noho nyadidy amandraikitra maro samy hafa e mirarisoa sy fahombiazana hoanareo koa izahay .Mirarisoa sy fahombiazana ho antsika rehetra... tohiny
Fetim-pirenena ao Milan.
Miarahaba anareo rehetra indray! Amin-kafaliana lehibe no anasana anareo havana aman-tsakaiza rehetra mba ho tonga hiaraka hilanona amin'i Fikambanana "Gasy Tsy Manavaka - G.T.M." ao Milan amin'ny Asabotsy 29 Jiona 2013, andro hankalazana ny Fetim-pirenena Malagasy. Arakin'ny voasoratra ao amin'ny... tohiny
Misaotra tamin'ny fiarahana nankalaza ny Festa dei Popoli
Manolotra fisaorana feno anareo rehetra tsy ankanavaka tonga nanome voninahitra an'i Madagasikara teny amin'ny kianjan'i San Giovanni omaly alahady 19 mey nandritra ny Festa dei Popoli 2013. Misaotra ny Ankohonana notarihin'i zoky aumônier izay nanotrona hatramin'ny farany mihitsy. Misaotra anareo... tohiny
Tonga soa atý amin’ny andiany faha-22 amin’ny “Festa dei Popoli” indray isika amin’ity taona 2013 ity, ka ny lohahevitra nomena azy ity dia ny hoe “Incontro che cambia”. Amin’ny alahady 19 mey 2013 ho avy izao no hanatontosana izany eny amin’ny kianja malalaky ny bazilikan’i San Giovanni in... tohiny
Ny fikambanan'ny Terak'i Fianarantsoa eto Roma dia faly manasa antsika tapaka sy namana hanatrika ny Sakafo Malagasy izay hataony ny 26 mai 2013 amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 6 ora hariva. Ny toerana dia ao amin'ny Via Pompeo Magno 25 (Miala metro A - Lepanto) Ny fandraisana anjara amin'... tohiny
Fitsangatsanganana 1er Avril 2013
Fampatsiahivana ho an'izay tsy mbola naheno fa hisy ny fitsangatsanganana iarahan'ny Malagasy rehetra amin'ny alatsinain'ny Paka (1er avril) ho avy izao. Ny toerana dia eny Montecassino, Parrocchia S. Pietro Apostolo, via Gaetano di Biasino 226. Jereo eto: http://goo.gl/maps/HwUBR Ny momba ny fiara... tohiny
Fankalazana ny 29 marsa 213 teto Roma
Tao amin'ny Fiangonana Protestanta tao amin'ny lalana IV Novembra no nankalazana ny fahatsiarovana ny olomangam-pirenena tamin'ity taona ity teto Roma. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny 2 ora tolakandro izany. Mompera Pierre-Emile no nitarika ny fotoana ary M. Dany kosa no nizara ny... tohiny
Lo spettacolo della natura ao Torino
Manasa antsika hanatrika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fampirantiana mitondra ny lohahevitra " Lo spettacolo della Natura " ao amin'ny Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, ao Torino ny zoma 8 martsa amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Marihina fa misy Sampana manokana momba... tohiny
ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN'NY TENIN-DRENY tao BORGOSESIA
FISAORANA Ny Fikambanana G.T.M. dia misaotra be dia be anareo rehetra tonga nanotrona ny Fankalazana ny ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN'NY TENIN-DRENY tao BORGOSESIA (VC) tamin'ny Asabotsy lasa teo. Nahavelom-bolo ary nampihetsi-pò tokoa ny fahatongavanareo (na ny lavitra na ny akaiky) sy ny... tohiny
Ce n'est qu'un aurevoir, petite Princesse.
Au bout de 5 mois ensemble, où la santé de notre Princesse Joséphine était au centre de nos journées et de nos soirées, nous voici tous incapables de nous rendre à l’évidence que notre vaillante combattante a tiré sa révérence et a pris son envol pour un monde meilleur. Comment oublier maintenant... tohiny
Vehivavy Malagasy, 9 martsa
Ny Fikambanana G.T.M. dia faly manasa ny Vehivavy Malagasy rehetra tsy an-kanavaka ho tonga ao Settimo Milanese (MI), ny Asabotsy 9 Marsa 2013, hihaonana amin'ny Mpisolovava RITA SOLARI, izay hanazava momba ny zon'ny vehivavy sy ny lalàna rehetra miaro azy. Toy ny fanaontsika ihany: iangaviana ny... tohiny